Harry Kane Oo Waajahaya Ganaax Saddex Kulan Ah Kaddib Ficilkii Uu Kula Kacay Cesar Azpilicueta – Cadalool.com
Harry Kane Oo Waajahaya Ganaax Saddex Kulan Ah Kaddib Ficilkii Uu Kula Kacay Cesar Azpilicueta
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Tottenham ee Harry Kane ayaa waajihi karaya ganaax saddex ciyaarood ah kaddib markii uu xalay hidh ku dhuftay difaaca iyo kabtanka Chelsea ee Cesar Azpilicueta.
Chelsea ayaa xalay 2-0 ku garaacday Tottenham, waxaanay kusoo laabatay jidka guusha iyadoo uu goolka koowaad u dhaliyey Pedro halka midka labaadna uu iska dhaliyey difaaca Spurs ee Kieran Tirpper, waxaanay Tottenham diiwaangashatay guul-darradii labaad ee xidhiidh ah, iyadoo horraantii toddobaadkanna ay Burnley u dhiibtay 2-1.
Tottenham waxa guul-darrooyinkan ay u bilaabmeen markii uu usoo laabtay weeraryahanka reer England ee Harry Kane oo dhawr toddobaad dhaawac kaga maqnaa, waxaana uu saftay labadan ciyaarood ee khasaaruhu kasoo gaadhay.
Guul-darradan waxa u raaci doonta Tottenham, ganaax saddex ciyaarood ah oo lagu ridi doonto Harry Kane kaddib markii uu isku dayey inuu hidh ku dhufto isla markaana taabsiiyey madaxiisa wejiga Cesar Azpilicueta.
Sida uu qoray wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, Harry Kane oo aanu garsoorihii ciyaartu Andre Marrinere wax tallaabo ah ka qaadin, ayaa waxa uu waajihi doonaa baadhitaan ay ficilkiisa ku samaynayaan xidhiidhka kubadda cagta ee FA.
Mark Halsey oo ah garsoore hore ayaa wargeyska The Sun u sheegay in Kane uu nasiib ku lahaa in aanu qaadanin kaadh cas oo uu ciyaarta dhamaystay.
“Harry Kane wuxuu ahaa wiil nasiib leh oo ka badbaaday casaan.” Sidaas ayuu yidhi garsoore Mark Halsey .
Kane ayaa waxa ficilkiisa dib u daawan doona saddex qof oo ka tirsan guddida anshaxa ee FA, waxaanay soo saari doonaan go’aan ay u badan tahay sida wargeysku sheegay in saddex ciyaarood uu dibedda kaga fadhiyo.